डा. युवराज खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त – HostKhabar ::
डा. युवराज खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं : अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा पुन नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ९१० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा डा। युवराज खतिवडाज्यूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाली आएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार पनि मन्त्री खतिवडाले नै सम्हाल्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडालाई आजै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ । ४ बजे शपथको तयारी गरिएको शीतलनिवास स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा सदस्य मध्ये दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका १९ जनाको पदावधि मंगलबार (हिजो) सकिएको हो । गोलाप्रथाबाट दुई वर्षे कार्यकाल पाएका डा खतिवडासहित १९ जनाको पदावधि सकिएको हो ।
धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ‘ उल्लेख छ । तर नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।